Uphengululo lweSmartMike + nguSabinetek, imakrofoni encinci engenazingcingo | Iindaba zeGajethi
Uphengululo lweSmartMike + nguSabinetek
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izixhobo, Umfanekiso kunye nesandi, Reviews
Namhlanje siza nayo uphononongo olunomdla kakhulu, ngakumbi kwabo bathi, phakathi kokuzonwabisa kwabo, okanye ngobungcali benze umxholo wee-audiovisual. Ngoncedo lweSabineTek sikwazi ukuvavanya I-SmartMike + imakrofoni yeBluetooth.
Isixhobo esiza kunika Ukudityaniswa komgangatho kwiividiyo zakho ngenxa yomgangatho wokurekhodwa kweaudiyo inikeza. Imakrofoni encinci leyo izakwenza lula izixhobo zakho zokurekhoda ubuncinci. Kwaye kuyakwenzeka ikwenza ukuba iphucule ngomsindo wenqanaba lobuchule.
1 SabineTek SmartMike +, mic oyikhangelayo
2 Umxholo webhokisi ye-SmartMike +
3 Uyilo kunye nembonakalo yomzimba weSmartMike +
4 Yonke iteknoloji iSmartMike + isinika yona
5 Itafile ezibalaseleyo zeSmartMike +
6 Iinkonzo kunye neengozi zeSabinetek SmartMike
SabineTek SmartMike +, mic oyikhangelayo
Ukuba ungumlandeli womculo kwaye uyathanda ukuzirekhoda. Ukuba uthatha inxaxheba kwipodcast. Okanye ukuba kwinqanaba lobungcali kufuneka urekhode ngokwakho kwisandi okanye kwividiyo. I-SabineTek SmartMike + yeyona nto iphambili yokufikelela. Imakrofoni engenazingcingo ngaphandle kwamacingo kunye nomgangatho weaudio wonke umntu ufuna kwi-vlog yakho okanye kunxibelelwano lwakho. Apha unayo kwiAmazon iSmartMike + ngokuhambisa simahla
Ulibale ezo bhotile zikhulu kunye nentambo engathandekiyo ngaphakathi kwempahla. Nge-clamp elula kwimveliso eyancitshisiwe ukuya kubukhulu obukhulu oya kuba nayo ukuya kuthi ga kumaxesha ama-6 ngaphezulu kunombhobho oqhelekileyo wemono. Conectividad i-Bluetooth 5.0 uzinzo oluqinisekileyo kunye Uyilo lwangoku Siza kukuxelela yonke into engezantsi.
Isixhobo esingabalulekanga kuyo yonke i-vlogger ifikile. Ukuba ufuna ukuba nayo esona sandi silungileyo kwiividiyo zakho okanye urekhode ipodcast yakho ngomgangatho ophezulu, yeka ukujonga. I-SmartMike + yimakrofoni efanelekileyo. phambili ungayithatha uyirekhode naphi na. Ukukwazi kwakho uku ukunciphisa ingxolo yenza ukurekhoda ngaphandle akusengxaki.
Umxholo webhokisi ye-SmartMike +
Ayisiyiyo nayiphi na ibhokisi engabhalwanga, sinamathuba ambalwa okuvavanya igajethi enje ngomboko ongenazingcingo. Lixesha lokuba ujonge ngaphakathi Ibhokisi yemakrofoni ekhethekileyo yeSabineTek ukukuxelela yonke into esisinika yona.
Ngaphandle kwemakrofoni, Esizichaza ngokweenkcukacha apha ngezantsi, sibona izinto ezininzi. Ngokungafaniyo nokwenzekayo ngee-headphone, zininzi Izixhobo ezifanelekileyo ukwenza i-SmartMike + igqibe ngakumbi.
Sine Intambo yokutshaja, ngefomathi I-USB encinci ukuya kwi-USB. Sifumene kwakhona iseti yentloko mono, indlebe enye ukuba sinokunxibelelana negalelo le-3.5 mm I-SmartMike + enayo. Y ingxowa encinci ephethe ilaphu kwaye ukuze umbhobho ukhuselwe ngokugqibeleleyo.
Okokugqibela, ukongeza kwincinci Sebenzisa kunye nesikhokelo soqwalaselo, esiza kuphela ngesiNgesi kunye nesiTshayina esifanelekileyo, sinokunye ukongezwa. Imalunga ne 'ii-hood' ezimbini zommandla wemakrofoni, enye ye amagwebu kunye nenye ye iinwele zokwenziwa inde. Zombini ziyakhonza ukunqanda ingxolo evela kunxibelelanisi okanye ingxolo yangaphandle Njengomoya, othe tyaba ngokugqibeleleyo.
Uyilo kunye nembonakalo yomzimba weSmartMike +
Ukongeza ekunikezeleni onke amanqaku esinokuwajonga kulongezo lolu hlobo, iSmartMike + ikwanayo uyilo oluhle kwaye linomtsalane. Yibane Umzimba wentsimbi ngemibala emibini zidityaniswe ngokugqibeleleyo. Sifumana iinguqulelo ezimbini, Mnyama okanye Mhlophe, kwelona candelo lide, kunye nombala wentsimbi kwindawo apho i-micro ikwindawo ebonakalayo.
Emazantsi ayo, Yeyiphi enokuba phantsi ukuba siyisebenzisa ibekwe ngocingo, sifumana ukulayishwa kwezibuko. Kule meko ligalelo Micro USB intambo yayo ifakiwe kwibhokisi yokutshaja.
Kulo Inxalenye engaphambili, ebonakalayo xa siyisebenzisa, sinayo isibane esincinci se-LED ezakutshintsha umbala kuxhomekeke ekubeni uyarekhoda okanye unqumama. Kwicala elingaphezulu sifumana, kwelinye icala imakrofoni ngokwayo. Micro esinokuyikhusela ngephedi encinci esiyifumana ngaphakathi kwebhokisi. Kwicala lakho, sibekwe ngokugqibeleleyo, Iqhosha lamandla. Ngefomathi ende ngombala obomvu onika inqaku lombala.
Kulo phezulu sine Igalelo le-jack eyi-3,5mm apho ungadibanisa khona iseti yentloko yeanalog. Into eza kusebenza ukuba negalelo lokumamela ngaxeshanye sithethe. Ke sinokuyigcina ngokugqibeleleyo incoko kunxibelelwano lwangoku, okanye urekhodo apho sinxibelelana khona ngomnxeba, umzekelo. Ukuba sisixhobo esasifuneka Thenga ngoku ngokunqakraza apha kwi-SmartMike +
Yonke iteknoloji iSmartMike + isinika yona
Njengoko besikubalisela, asijonganga nenye yeemakrofoni ezinomtsalane kwintengiso. Ukongeza kwifomathi ehambelana kakuhle kunye noyilo oluhle ngokwenene, I-SmartMike + ifike yaxhotyiswa ngetekhnoloji efanelekileyo yomzuzu ukunikezela ngesandi esiphakamileyo sokurekhoda okanye usasazo.
Enye yeenkcukacha ezibalulekileyo zento encinci yokurekhoda yinto yokuzimela enokusinika yona. I-SmartMike + inayo ibhetri ye-110 mAh, ebonakala ngathi incinci kakhulu. Kodwa enkosi ekusebenzeni kwamandla kakuhle Uyakwazi ukusinika iiyure ezingama-5 zomsebenzi ongaphazanyiswanga.
Inayo ngaphakathi nge chip eyenziweyo kuphela Uphuhliso lwayo lufezekise ukusebenza okuphezulu kwazo zonke izixhobo ngexesha lokusebenza, IQualcomm CSR8670. Ivumela a ukurekhoda ngokufanelekileyo kunye nesandi somgangatho enkosi ukunciphisa ingxolo. Enkosi kwi Technology TWS, SmartMike + inokudityaniswa nenye ilinganayo kwaye isetyenziswe ngaxeshanye xa kukho abantu abaninzi abathethathethanayo.
Singasebenzisa imakrofoni kaSabinetek ukurekhoda ngokwethu ngelixa sincokola ngomnxeba. Kwaye sinokubulela ngokuvakalayo kwi-headset esiyifumana ngaphakathi kwebhokisi. Ukongeza, idlulisa i-ultra-low latency i-audio-channel audio ngaphakathi kwe-49.2 ft. Iyayamkela iaudiyo kwaye inike ithuba lokuzenzekelayo kweefayile zemibhalo engezantsi ehleliweyo.
Itafile ezibalaseleyo zeSmartMike +
Umzekelo SmartMike +
chip IQualcomm CSR8670
Ijelo elingenantambo 2
Umlinganiselo wesampulu 44.1 Khz
Inkqubo I-A2DP-HFP -I-SWISS
Ibhetri 110 mah
Ukuzimela Ukuya kwiiyure ezi-5
I-Ancho de banda 220.05 Khz
Ujongano lweAnalog 3.5 mm
U bunzima 14 g
Ubukhulu X x 5.8 1 1.5 cm
Ixabiso 132.99 €
Ikhonkco lokuthenga SmartMike +
Iinkonzo kunye neengozi zeSabinetek SmartMike
Tamaño incitshiswe ngokufana nePen Drive
Ukuhambelana ngazo zonke iifomati ezikhoyo
Umgangatho wobungcali ekurekhodweni kwesandi kwividiyo kunye nevidiyo
Ukuzimela kwe ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-5 zokusetyenziswa yaqhubeka.
Ibhetri incinci kakhulu ngenani, nangona ngokuzimela bayazikhusela kakuhle
Uqinisa emxinwa kancinane yengubo okanye iingubo ezityebileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uphengululo lweSmartMike + nguSabinetek
Ungayzama njani iGoogle Stadia Pro yasimahla iinyanga ezi-2